Ungalujolisa njani uphando kwifolda okanye kulawulo kwi-Finder | Ndisuka mac
Abanye abasebenzisi basixelela ukuba xa besenza uphando kwi-Finder babona "iziphumo ezininzi" zifunyenwe xa ngaphakathi kwifolda okanye kulawulo. Ukuze uMfumani wethu ahlule phakathi kophendlo kwi-Mac yethu okanye kwifolda esiyibonayo ngalo mzuzu kanye, sinokukhetha okulungiselelwe kwaye kube lula ekufuneka sikutshintshe kwi-Finder. Ngokucacileyo olu khetho luvela kwimvelaphi efanayo kuzo zonke iiMacs kwaye xa sisenza uphando kwibhokisi yencoko yababini yokuKhangela ijonge kuthi kwiqela lethu lonke, namhlanje siza kubona ukuba silutshintsha njani olu phando ngendlela elula ukukhangela kwethu kugxile kwifolda esikulo mzuzu.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu sele nilwazi olu khetho lukho kwi-Finder, kodwa kwabo bangayaziyo, akukho nzima ukuyifumana. Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukufikelela kukhetho lokufumana kwaye oku sinokukwenza ukusuka kwimenyu ephezulu okanye ngokunqumlela kwi-keyboard «cmd,» Nje ukuba sibe nefestile kunye nezinto ezikhethwayo zokufumana siye kwithebhu Advanced.
Kumfanekiso ongasentla ungabona ukhetho olusezantsi "Xa usenza uphando:" Imenyu eyehlayo apho sinokukhetha khona ezintathu:
Khangela le Mac
Khangela ifolda yangoku
Sebenzisa indawo yokukhangela yangaphambili
Ngokwazi kwam, ukhetho olwenziweyo ngokungagqibekanga lolokuqala kwaye kule meko, ukuba ngakumbi ngakumbi kukhangelo ngaphakathi kwifolda okanye isikhombisi, esiya kuthi sikhethe "Khangela kulawulo lwangoku". Ngale ndlela, xa sikhangela kwifolda okanye isikhombisi esinomxholo omninzi, sinokucaciswa ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungalujonga njani ukhangelo kwifolda yokufumana okanye kulawulo
Izikrini 4 zihlaziywa kuyilo olutsha kunye nemisebenzi emitsha